Kuphelile obekuhlanganise uDiego Costa ne-Atletico Madrid - Impempe
Kuphelile obekuhlanganise uDiego Costa ne-Atletico Madrid
December 29, 2020 Impempe.com
UDiego Costa obedlalela i-Atletico Madrid usengazitholela elinye iqembu alithandayo ngemuva kokuthi bevumelene nalaleli qembu laseSpain ukuthi kunqanyule inkontileka yakhe.
Lo mgadli oke wayibamba kwiChelsea FC, yase-England, useyishiyile i-Atletico Madrid ngemuva kokuthi isicelo sakhe sokushiya iqembu simukelwe yizikhulu zalo. Lo mdlali oneminyaka engu-32 ubeke izizathu ezithinta yena ngokufuna ukushiya iWanda Metropolitan ngemuva kokutshelwa ukuthi angaziqeqeshi neqembu. Naye uCosta ubeseke wakucacisa ukuthi akazimisele ukusayina enye inkontilake neqembu.
IMadrid ezihola phambili njengamanje kwiLa Liga, ivumile ukunqamula inkontileka yakhe njengoba kuzovula iwindi lokusayinisa abadlali ngoJanuwari.
“Umdlali ucele ukulishiya iqembu ngezizathu ezithinta yena uqobo ezinsukwini ezimbalwa ezidlule, kwathi ngoLwesibili wasayina ukuthi uyalishiya iqembu. Iqembu liyabonga kakhulu kuCosta ngokuzinikela kwakhe eqenjini kule minyaka elidlalela futhi limfisela okuhla kodwa,” kusho isitatimende seqembu.
UCosta ubelokhu ehlushwa ukungabi wumqemane ngokwanele selokhu ebuyele kwiMadrid esuka kwiChelse ngo-2018. Emidlalweni engu-61 ayidlalile selokhu ebuyele kuleli qembu laseSpain, ushaye amagoli angu-12 kuphela. Ugcine ukushaya igoli ngephenathi ayishaye bebhekene ne-Elche ngoDisemba 19. Kulo mdlalo bawine ngo 3-1 kanti amanye amagoli amabili ashaywe nguLuis Suarez.
Previous Previous post: AmaProteas azidlele amahlanga kwiSri Lanka kwiTest yokuqala eCenturion
Next Next post: USeema noFreese bathole amakhaya amasha